Burma Partnership » Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (020-2010)
Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (020-2010)
By Network for Democracy and Development • June 14, 2010
In this week’s political events you will find:
An officer from the 5th Brigade of Democratic Karen Buddhist Army stated that the military regime seriously warned DKBA 5th Brigade on5June to transform itself intoaborder guard force by 10 August 2010.
Mr. Eric P. Schwartz, the Assistant Secretary of the US Department of State for Population, Refugees and Migration urged the Thai government not to deport Burmese refugees back to Burma and to let them take refuge in Thai soil if the elections in Burma are not free and fair elections.
Maj. Saw Hla Ngwe, the Secretary (1) of the Karen National Union (KNU), stated that2skirmishes occurred between Karen National Liberation Army (KNLA) and SPDC troops in Kya In-Seikkyi Township, Karen State on 10 June, and 11 SPDC soldiers were killed and about 20 were injured.
and much more news.
စစ်အစိုးရက တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသာ တပ်မတော် တပ်မာဟာ ၅ ကိုလာမည့် သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ရန် ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့တွင်ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိပေးခဲ့ပါသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ ကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲသည် လွတ်လပ်၍တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ပါက မြန်မာ ဒုက္ခသည်များကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်မပို့ရန်နှင့် ဆက်လက်၍နေထိုင်ခွင့်ပေးသင့်ကြောင်း အမေရိကန် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ဒုက္ခသည် များဆိုင်ရာ ဒု-လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Mr.Eric Schwartz မှ ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကို တိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။
ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း နအဖစစ်တပ်နှင့် ကရင်အမျိုးသာအစည်းအရုံး (KNU) လက်အောက်ခံ KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြား ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့က တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ နအဖစစ်သား စုစုပေါင်း ၁၁ဦးကျဆုံးခဲ့ကာ ၂၀ဦးခန့်ဒဏ်ရာရှိခဲ့။
စသည်သတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင် အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း စုံလင်စွာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။